သင်၏အလုပ်ရှင်သည်သင့်ကိုသူလျှိုလုပ်နိုင်ပါသလား။ | OMG Solutions
အလုပ်ခွင်ရှိ ၀ န်ထမ်း၏ကြီးကြပ်မှုကို:
ယနေ့ခေတ်တွင်သင်၏အလုပ်ရှင်သို့မဟုတ်အမှုသည်သည်သင့်အား Hidden ကင်မရာများသို့မဟုတ် GPS Trackers သို့မဟုတ် Voice Recorder နှင့်စောင့်ကြည့်နေခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာသည် ၀ န်ထမ်းများအားလျှို့ဝှက်ကင်မရာများ (သို့) Voice Recorder သို့မဟုတ် GPS Trackers များမှတဆင့်ကြည့်ရှုရန်ပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။ အလုပ်ရှင်များသည် ၀ န်ထမ်းများကိုနည်းအမျိုးမျိုးဖြင့်ကြည့်ရှုနိုင်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်တရား ၀ င်လိုအပ်ချက်များနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောနည်းဖြင့်ပြုလုပ်ရမည်။
အလုပ်ရှင်များစွာသည်သူတို့၏ ၀ န်ထမ်းများမှဖုန်းနှင့်အိုင်တီစနစ်အသုံးပြုမှုကိုကြည့်ရှုရန်ရွေးချယ်လိမ့်မည်။ အချို့သောကဏ္inများတွင်အလုပ်ရှင်များသည်သူတို့၏ကုန်ပစ္စည်း / ထုတ်ကုန် / ဝုဏ်အတွင်းကိုကြည့်ရှုရန်အတွက်ယာဉ်နောက်ခံနှင့် CCTV နှင့်အခြားနည်းစနစ်များကိုအသုံးပြုလိမ့်မည်။ ဤဆောင်းပါး၌၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်လျှို့ဝှက်ကင်မရာ၊ GPS Trackers နှင့် Voice Recorder တို့ဖြင့်စောင့်ကြည့်ခြင်းကိုအာရုံစိုက်ရမည်။
နည်းပညာတိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှအချို့သောကုမ္ပဏီများသည်သူတို့၏ ၀ န်ထမ်းများအားလျှို့ဝှက်ကင်မရာများ၊ GPS Trackers နှင့် Voice Recorder တို့ဖြင့်ထည့်သွင်းခြင်းကဲ့သို့ပင်အဆင့်မြင့်သွားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏နောက်ဆုံးပေါ်စက်ကိရိယာများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့ဝင်ရောက်ပါ။
အလုပ်ရှင်များမှ ၀ န်ထမ်းများအားကြီးကြပ်ရခြင်း၏အကြောင်းရင်းများ -
အလုပ်ရှင်များသည်အောက်ဖော်ပြပါအကြောင်းပြချက်များကြောင့် ၀ န်ထမ်းများအားစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရန်ရွေးချယ်နိုင်သည်။
၄ င်းတို့၏ ၀ န်ထမ်းများ (သို့) အများပြည်သူ ၀ န်ထမ်းများကိုကာကွယ်ရန်ဥပမာအားဖြင့်ကျန်းမာရေးနှင့်ဘေးကင်းရေးအကြောင်းများ၊ အကြမ်းဖက်မှုနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာများကိုလုယက်ခြင်း၊ ရုံးနှင့်အခြားစီးပွားရေးစင်တာများတွင်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းခြင်း။
၀ န်ထမ်းများ (သို့) အများပြည်သူ ၀ န်ထမ်းများကမူပိုင်ခွင့်နှင့်စီးပွားရေးအကျပ်အတည်းများကိုမမှန်မကန်ပြုခြင်း၊ ပြစ်မှုကျူးလွန်ခြင်း၊ ခိုးယူခြင်းသို့မဟုတ်လိမ်လည်ခြင်းများကိုစစ်ဆေးရန်နှင့်ကုမ္ပဏီ၏ပေါ်လစီများကိုမချိုးဖောက်ကြောင်းသေချာစေရန်။
ဖောက်သည် ၀ န်ဆောင်မှုများ၏အရည်အသွေးကိုသေချာစေရန် (၄ င်းတို့ ၀ န်ထမ်းများအတွက်လေ့ကျင့်သင်ကြားမှုလိုအပ်ချက်ကိုမီးမောင်းထိုးပြနိုင်သည့်) ကုန်ထုတ်စွမ်းအားကိုအကဲဖြတ်ရန်နှင့်တိုးတက်စေရန်။ ဖောက်သည်များ၏တိုင်ကြားချက်များကိုဖြေရှင်းနေကြောင်းသေချာစေရန်။
ဥပဒေနှင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုလိုက်နာခြင်းနှင့် ၀ န်ထမ်းများအားအဖွဲ့အစည်း၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုလိုက်နာရန်ခိုင်းစေခြင်း။
ကုမ္ပဏီကြီးတွင်အလုပ်ရှင်ကြီးများသည်ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်လစီရှိလိမ့်မည်။ ၎င်းတွင် ၀ န်ထမ်းများ၏ကွန်ရက်ဝက်ဘ်ဆိုက်များအသုံးပြုမှုကိုစောင့်ကြည့်ခြင်း (ကုမ္ပဏီ၏ကိုယ်ပိုင်ဆိုရှယ်မီဒီယာစာမျက်နှာတွင်သို့မဟုတ် ၀ န်ထမ်း၏ကိုယ်ပိုင်ဆိုရှယ်မီဒီယာစာမျက်နှာတွင်) စောင့်ကြည့်ခြင်းပါဝင်နိုင်သည်။ အလုပ်ရှင်များစွာတွင် ၀ န်ထမ်းများကသူတို့၏စနစ်များကိုမည်သို့အသုံးပြုနိုင်သည်ကိုဖော်ပြထားသည့်အိုင်တီနှင့်ဆက်သွယ်ရေးပေါ်လစီရှိလိမ့်မည် (၎င်းတွင်ကုမ္ပဏီပိုင်တက်ဘလက်များနှင့်မိုဘိုင်းဖုန်းများနှင့် Bring-Your-Own-device ၏မူဝါဒများပါဝင်နိုင်သည်) ။ ကျနော်တို့အသေးစိတ်အတွက်စောင့်ကြည့်များအတွက်အရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်ရှိသည် ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ.
စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ယူကေနိုင်ငံ၏ဥပဒေများ -
စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးလုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာစည်းမျဉ်းဥပဒေ 2000 (RIPA) နှင့် 2016
ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ 2000 (တရားဝင်စီးပွားရေးလုပ်ထုံးလုပ်နည်း)
အချက်အလက်ကာကွယ်ခြင်းဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းများ 2018 နှင့်အချက်အလက်ကာကွယ်ရေးအက်ဥပဒေ 2018 - အလုပ်ရှင်များသည် GDPR နှင့် DPA နှင့်၎င်း၏အဓိကသော့ချက် ၆ ချက်ကိုလိုက်နာရမည်။
အလုပ်ရှင်နှင့် ၀ န်ထမ်းများအကြားတည်ရှိနေသည့်ယုံကြည်မှုနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရမှု၏ဆက်စပ်နေသောတရား ၀ င်လိုအပ်ချက်သည်လည်းဆက်စပ်မှုရှိသည်။ အလုပ်ရှင်များသည်၎င်းတို့နှင့်သူတို့အကြားအပြန်အလှန်ယုံကြည်မှုနှင့်ယုံကြည်မှုဆိုင်ရာဆက်နွယ်မှုကိုဖျက်ဆီးရန်သို့မဟုတ်ထိခိုက်စေရန်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောယုတ္တိနှင့်သင့်လျော်သောအကြောင်းပြချက်မရှိဘဲအရေးမလုပ်သင့်ပါ ဝန်ထမ်းများ။
သို့ရာတွင် 1998 ၏လူ့အခွင့်အရေးအက်ဥပဒေသည်ဤတွင်သိသာထင်ရှားသောအနေအထားတွင်ပါ ၀ င်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်လူတစ် ဦး ချင်းစီအားသီးသန့်နေထိုင်ခွင့်အခွင့်အရေးပေးထားသည်။ ၀ န်ထမ်းများအနေဖြင့်အလုပ်ခွင်တွင်၎င်းတို့၏အလုပ်ရှင်မှစောင့်ကြည့်ခြင်းကိုနှောင့်ယှက်နေသည်ဟုခံစားရနိုင်ကြောင်းဗြိတိန်နိုင်ငံ၏ဥပဒေများကဖော်ထုတ်သည်။
ထို့ကြောင့်အလုပ်ရှင်များသည် ၀ န်ထမ်းများအား၎င်းတို့၏ ၀ န်ထမ်းများကိုစောင့်ကြည့်သည့်အခါ ၀ န်ထမ်းတစ် ဦး ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စအားမှန်ကန်စွာမျှော်လင့်ခြင်းနှင့်အလုပ်ရှင်အကျိုးစီးပွားများအကြားမျှတမှုရှာရန်လိုအပ်သည်။ စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းအတွက်တရားဝင်အကြောင်းပြချက်ရှိရမည်။
ပစ်မှတ်ထားလေ့လာခြင်း (တစ် ဦး ချင်း၏) နှင့်စနစ်တကျလေ့လာရေး (န်ထမ်းများသို့မဟုတ်ဝန်ထမ်းအုပ်စုများအားလုံးအလားတူလေ့လာတွေ့ရှိရပါသည်ရှိရာ)
အသုံးပြုပြီးသားဆက်သွယ်မှုများကိုစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်ကြည့်ရှုခြင်းသို့မဟုတ်ရယူခြင်းမရှိသောအီလက်ထရောနစ်ဆက်သွယ်ရေးများ (ဥပမာအင်တာနက်ဆက်သွယ်မှု၊ ဖက်စ်များနှင့်တယ်လီဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများ) ကိုစောင့်ကြည့်ခြင်း။ ဆက်သွယ်မှု၏ပါ ၀ င်သူကိုပေးပို့သူ (သို့) ရည်ရွယ်သည့်လက်ခံသူ မှလွဲ၍ တစ်စုံတစ် ဦး မှရရှိသောအခါ 'ကြားဖြတ်ခြင်း' ဖြစ်ပေါ်သည်။ ဆက်သွယ်ရေး၏ပေးပို့သူနှင့်လက်ခံရရှိသူကဒီဥပဒေရေးရာဖြစ်ဘို့ကြားဖြတ်ဖို့အတည်ပြုရမည်ဖြစ်သည်။ 'ကြားဖြတ်' ခြင်းကို RIPA နှင့် LBP ဥပဒေများ (အထက်) အရတရားဝင်ဖြစ်စေသည်။
ဤစောင့်ကြည့်ခြင်းအမျိုးအစားအားလုံးသည်တရား ၀ င်နိုင်သည်။
ထို့ကြောင့်အလုပ်ရှင်များသည်စောင့်ကြည့်စနစ်များကိုတည်ထောင်သောအခါ၎င်းတို့သည် (စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးမှုသည်တရား ၀ င်မှုရှိစေရန်) လုပ်ရမည်။
Hidden Camera / GPS Trackers / Voice Recorder / monitoring ကိုအတည်ပြုရန် 'သက်ရောက်မှုအကဲဖြတ်ခြင်း' ကိုလုပ်ဆောင်ပါ။ ၎င်းသည်စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း၏နောက်ကွယ်အကြောင်းရင်းနှင့်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောအမြတ်နှင့်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုဖော်ထုတ်သည်; ရည်ရွယ်ချက်အောင်မြင်ရသောအခြားရွေးချယ်စရာနည်းလမ်းများမှာကြည့်ရှု; စောင့်ကြည့်ခြင်းမှရရှိသောလိုအပ်ချက်များကိုကြည့်ရှုပါ။ ဥပမာ - ၀ န်ထမ်းများအားအသိပေးခြင်း၊ ဒေတာများကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်း၊ ၀ န်ထမ်းများမှဘာသာရပ်လက်လှမ်းမီမှုတောင်းဆိုမှုများ (SAR); ဆုံးဖြတ်ချက်သည်ယုတ္တိရှိမရှိ (၀ န်ထမ်းများကြုံတွေ့ရနိုင်သည့်ဆိုးကျိုးများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက)
ဖြစ်နိုင်သည့်စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း၏အကြောင်းရင်း၊ အတိုင်းအတာနှင့်သဘောသဘာဝကို ၀ န်ထမ်းများအားပြောပါ။ ၀ န်ထမ်းများအနေဖြင့် ၄ င်းတို့၏အလုပ်ရှင်၏တံခါးများမှတဆင့်လျှောက်သောအခါသူတို့၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာလုံခြုံမှုအခွင့်အရေးကိုကန့်သတ်မထားပါ။
၀ န်ထမ်းတစ် ဦး သည် ၄ ​​င်းတို့၏အလုပ်ရှင်စနစ်များကိုပုဂ္ဂလိကဆက်သွယ်မှုပြုလုပ်ရာတွင်လည်းကောင်း၊ သတိရှိခြင်းအောက်ရှိbreakရိယာများသို့မဟုတ်နေရာများကိုချိုးဖောက်ခြင်းကိုလည်းကောင်းအသုံးပြုသောအခါမည်သည့်လုံခြုံစိတ်ချရမှုအဆင့်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းထားပါ
အကယ်၍ အခြားတယ်လီဖုန်းများကိုပုံမှန်မှတ်တမ်းတင် / စောင့်ကြည့်နေပါက ၀ န်ထမ်းများအားအရေးပေါ်အခြေအနေတွင်အသုံးပြုရန်အတွက်အသံသွင်းထားခြင်းမရှိသောတယ်လီဖုန်းလိုင်းပေးပါ
ပုဂ္ဂလိကအကြောင်းပြချက်များကြောင့် ၀ န်ထမ်းမှမည်သည့်အီးမေး၊ အင်တာနက်၊
လေ့လာရေးမှတစ်ဆင့်ရရှိသောအချက်အလက်များကိုသူဌေးကမည်သို့အသုံးပြုမည်ကိုရှင်းပြပါ။ ဥပမာ ၀ န်ထမ်းတစ်ယောက်က Hidden ကင်မရာများ၊ GPS Trackers၊ Voice Recorder များရှိတယ်ဆိုတာသတိထားမိမှာပါ၊ သို့သော် အကယ်၍ ၀ န်ထမ်းသည်ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ခြင်းမပြုလုပ်ခဲ့လျှင် Hidden Camera, GPS Tracker နှင့် Voice Recorder ကိုအသုံးပြုပြီးအလုပ်ရှင်အားစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအရအတည်ပြုလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ကြောင်းရည်ရွယ်ချက်အတွက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် - ၀ န်ထမ်းတစ် ဦး သည် Hidden Camera၊ GPS Tracker နှင့် Voice Recorder တို့ကိုလက်ခံရန်အခွင့်အရေးရှိသည်၊ ၎င်းတို့အားအခြားအကြောင်းပြချက်မပေးလျှင်မှသာလုံခြုံရေးအကြောင်းပြချက်အတွက်အသုံးပြုလိမ့်မည်။
စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးတွင်ပါ ၀ င်သူများသည်၎င်းတို့၏သီးသန့်လုံခြုံရေးတာဝန်ဝတ္တရားများကိုသတိပြုမိရန်သေချာစေပါ
GDPR နှင့်ဒေတာကာကွယ်ရေးအက်ဥပဒေအရမည်သည့်သတင်းအချက်အလက်ကိုမည်သို့သိမ်းဆည်းပြီးမည်ကဲ့သို့စီမံမည်၊ မည်သူသည်ဤသတင်းအချက်အလက်ကိုလက်လှမ်းမီကြောင်းရှင်းပြပါ
၀ န်ထမ်းများအနေဖြင့်၎င်းတို့တွင်ရှိသောမည်သည့်စိုးရိမ်မှုများကိုမဆိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်ပြုပါစေ။ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေနှင့်အသုံးပြုသောမည်သည့်ဗွီဒီယိုမှတ်တမ်းကိုမဆို၎င်းတို့အားရှင်းပြရန်သို့မဟုတ်စိန်ခေါ်ရန်အခွင့်အရေးပေးသည်။
များသောအားဖြင့်စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်းသည်အလုပ်ရှင်မှသာရှင်းလင်းစွာနှင့်စနစ်တကျပြုလုပ်သင့်သည်၊ ပစ်မှတ်ထားပြီး / သို့မဟုတ်လျှို့ဝှက်စောင့်ကြည့်ခြင်းသည်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သည်မှအပ။
ပစ်မှတ်ထား / လျှို့ဝှက်စောင့်ကြည့်ခြင်းသည်ယေဘုယျအားဖြင့်သာမန်အခြေအနေတွင်သာကျိုးကြောင်းဆီလျော်သည်၊ ၎င်းတွင် ၀ န်ထမ်းမှရာဇ ၀ တ်မှုဆိုင်ရာအရေးယူမှုသို့မဟုတ်ကြီးလေးသောပရော်ဖက်ရှင်နယ်အပြုအမူကိုသံသယဝင်ရန်အကြောင်းပြချက်များရှိပြီးအခြားနည်းတစ်စုံတစ်ရာမျှကျိုးကြောင်းဆီလျော်မှုမရှိပါကစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးမှုသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ ။
ထိုသို့သောစောင့်ကြည့်ခြင်းကိုသတ်မှတ်ထားသောအချိန်ကာလတစ်ခုအတွင်း၌သာသတ်သတ်မှတ်မှတ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေနှင့်သာပြုလုပ်သင့်ပြီး 'အပြစ်မဲ့' အလုပ်သမားများအပေါ်အနှောင့်အယှက်ပေးမှုကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်။ ထိုသို့သောစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်းကိုအလုပ်ရှင်၏အချက်အလက်ကာကွယ်မှုသို့မဟုတ်သီးသန့်တည်ရှိမှုမူဝါဒတွင်ဖြစ်နိုင်ခြေအဖြစ်ဖော်ပြသင့်သည်။ ဤစောင့်ကြည့်မှုသည်ပုံမှန်အားဖြင့်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးကြားနာခြင်းသို့ ဦး တည်သွားမည်ဖြစ်ပြီးအလုပ်ရှင်က ၀ န်ထမ်းသည်ကုမ္ပဏီ၏မူဝါဒများကိုဖောက်ဖျက်သည်ဟုယူဆသည်။
အကယ်၍ ဤပစ်မှတ်ထားစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်းသည်အခြားလုပ်သားများမှအခြားအကျင့်ပျက်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ မရည်ရွယ်ဘဲသတင်းအချက်အလက်ပေးသည်ဆိုပါက၎င်းသည်ပြင်းထန်သည့်အကြမ်းမဖက်သောအပြုအမူဖြစ်ရပ်မဟုတ်ပါက ၀ န်ထမ်းများအားဤသက်သေအထောက်အထားကိုအသုံးမပြုသင့်ပါ။ အပြုအမူမှားယွင်းမှုနည်းနေပါက ၀ န်ထမ်းတစ် ဦး အားစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရန် 'လျှို့ဝှက်' ဗွီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ခြင်းကိုများသောအားဖြင့်ခွင့်မပြုပါ။
အလုပ်ရှင်မှသူသည်အကျိုးသင့်အကြောင်းသင့်ရှိကြောင်းပြနိုင်လျှင်အလုပ်ခွင်ပြင်ပရှိ ၀ န်ထမ်းများကိုအနီးကပ်စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်သင့်တော်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်။ (သူတို့တွင် ၀ န်ထမ်းများကကုမ္ပဏီ၏မူဝါဒများကိုချိုးဖောက်ခြင်းသို့မဟုတ်ချိုးဖောက်မှုများတွင်ပါ ၀ င်ပတ်သက်နေသည်ဟုဖော်ပြရန်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောအကြောင်းရင်းများရှိသည်) နှင့်အချိုးအစား (အလုပ်ရှင်အနေဖြင့်နောက်ထပ်မသွားခဲ့ပါ) ထက်) လေ့လာရေး၎င်း၏အသုံးပြုမှုအတွက်မရှိမဖြစ်ဖြစ်ခဲ့သည်။
မေလ 25, 2018, GDPR ဥပဒေဖြစ်လာတဲ့အခါပြန်ကြားရေးကော်မရှင်နာရုံးက ၀ န်ထမ်းများအားလျှို့ဝှက်စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်းသည်ထူးခြားသောအခြေအနေများတွင်သာပြစ်မှုကိုရှောင်ရှားခြင်းသို့မဟုတ်ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းကိုထိခိုက်စေသည့်အခါမှသာတရား ၀ င်ခွင့်ပြုနိုင်သည်။ အလုပ်ရှင်များသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အရည်အသွေးမြင့်သော ၀ န်ထမ်းများအားစောင့်ကြည့်ရန်မှီခိုနိုင်သည်။ အသေးစိတ်အတွက်ဤနေရာကိုနှိပ်ပါ.
Community Gateway Association နှင့် Atkinson နှင့် 2014 ၏တရားစွဲဆိုမှုတွင်အလုပ်ခန့်ထားမှုဆိုင်ရာအယူခံရုံးမှ ၀ န်ထမ်း၏အီးမေးလ်များကိုရှာဖွေတွေ့ရှိသူသည် ၀ န်ထမ်း၏အပြုအမူအပေါ်အပြစ်ပေးအရေးယူမှုများပြုလုပ်ရာတွင် ၀ န်ထမ်းများ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဘဝကိုမမျှတစွာ ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းမရှိဟုပြောကြားခဲ့သည် ၀ န်ထမ်းသည်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာလုံခြုံမှုအတွက်မျှော်လင့်ချက်မရှိသော (သူဖော်ပြခဲ့ပြီး၊ လိုက်နာရန်တာဝန်ရှိသည်) အီးမေးလ်ပေါ်လစီအားဖောက်ဖျက်ပြီးသူ၏အလုပ်အကောင့်မှအီးမေးလ်များကိုပေးပို့သောအခြေအနေများတွင်လုံခြုံမှုရှိရန်မျှော်လင့်ချက်မရှိခဲ့ပါ။ private '။
မစ္စတာအက်ကင်ဆင် (Mr. Atkinson) သည်အသင်း၏အီးမေးလ်ပေါ်လစီအားဖောက်ဖျက်သောအားဖြင့်အီးမေးလ်စနစ်ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်ဟူသောအချက်ကိုသူ၏အပြုအမူအားတရား ၀ င်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု၏ရလဒ်အဖြစ်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ၀ န်ထမ်းများအားလုံးကိုအီးမေးလ်နှင့်အင်တာနက်အသုံးပြုမှုပေါ်လစီ (သို့မဟုတ်အလားတူ) မရှိပါက ၀ န်ထမ်းများအနေဖြင့်အလုပ်ခွင်၌လုံခြုံမှုရှိသည်ဟူသောခိုင်လုံသောမျှော်လင့်ချက်ရှိနိုင်သည်ဟုအလုပ်ရှင်များကခံယူထားသင့်သည်။
2018 အစောပိုင်းတွင်ဥရောပလူ့အခွင့်အရေးတရားရုံး (ECHR) မှသိသာသောဆုံးဖြတ်ချက်နှစ်ခုကိုချမှတ်ခဲ့သည်။
In မွန်တီနီဂရိုးနှင့် Antovic နှင့် Mirkovic နှိုင်းယှဉ်၊ ECHR ကလူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအရပါမောက္ခနှစ် ဦး ၏လျှို့ဝှက်အခွင့်အရေးကိုချိုးဖောက်ခြင်းသည်ကျောင်းသားခန်းမများတွင်လေ့လာရေးကင်မရာများတပ်ဆင်ရန် (ဆိုလိုသည်မှာပစ္စည်းဥစ္စာများနှင့်လူများကိုကာကွယ်ရန်နှင့်သင်ကြားမှုကိုစောင့်ကြည့်ရန်ဖြစ်သည်) ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ECHR က '' ပုဂ္ဂလိကဘဝ '' သည်အများပြည်သူနောက်ခံ (ဇာတ်ရုံ) တွင်ပြုလုပ်သောပရော်ဖက်ရှင်နယ်လှုပ်ရှားမှုများပါ ၀ င်နိုင်ပြီး၊ အလုပ်ရှင်ကစောင့်ကြည့်လေ့လာရန်လုံလောက်သောအကြောင်းပြချက်မရှိခြင်းကြောင့်ပိုင်ဆိုင်မှုသို့မဟုတ်လူများအန္တရာယ်ရှိနိုင်ကြောင်းအထောက်အထားမရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
၏စပိန်ကိစ္စတွင် Lopez Ribalda and Others v စပိန်နိုင်ငံ၀ န်ထမ်းများ၏သံသယဖြစ်ဖွယ်လုယက်မှုများကိုကြည့်ရှုရန်စူပါမားကတ်တစ်ခုတွင်ဖုံးကွယ်ထားသောဗွီဒီယိုကင်မရာများအသုံးပြုမှုသည်ဥရောပလူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာကွန်ဗင်းရှင်းအပိုဒ် 8 အရသူတို့၏ privacy အခွင့်အရေးကိုချိုးဖောက်သည်ဟု ECHR တွေ့ရှိခဲ့သည်။
2009 တွင်စတော့ရှယ်ယာနှင့်ရောင်းအားပမာဏအကြား 20,000 တန်ဖိုးရှိသည့်လများအတွင်းမမှန်မှုများကိုတွေ့မြင်ပြီးနောက်လအနည်းငယ်အတွင်းစူပါမားကက်သည်မြင်နိုင်သော CCTV ကင်မရာနှင့်အတူစတိုးဆိုင်တစ်လျှောက်ရှိသူတို့၏ငွေကိုင်ကောင်တာများနောက်ကွယ်၌လျှို့ဝှက်ကင်မရာများတပ်ဆင်ခဲ့သည်။ စောင့်ကြည့်ရေးကင်မရာများကသူတို့ကိုခိုးသည် (သို့မဟုတ်အခြား ၀ န်ထမ်းများသို့မဟုတ်ဖောက်သည်များခိုးယူရန်ကူညီခြင်း) ကိုသတိပြုမိပြီးနောက်အလုပ်သမား ၅ ဦး အလုပ်မှရပ်စဲလိုက်သည်။ ၀ န်ထမ်းများကသူတို့၏လျှို့ဝှက်မှတ်တမ်းများကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်၎င်းတို့၏ဒေတာလုံခြုံမှုအခွင့်အရေးနှင့်သီးသန့်တည်ရှိမှုအခွင့်အရေးကိုချိုးဖောက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
စပိန်တရားရုံးများကဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်ခဲ့ပြီးလျှို့ဝှက်စောင့်ကြည့်မှုကိုခိုင်လုံစေသည့်အတွက်ရပ်စဲခြင်းသည်မျှတကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ ECHR သည်စပိန်တရားရုံးများသည် ၀ န်ထမ်းများ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာနှင့်ဆိုင်သောအခွင့်အရေးနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုကာကွယ်ရန်အခွင့်အရေးအကြားမျှတသောမျှတမှုကိုရှာဖွေရန်မအောင်မြင်ကြောင်းနှင့် ECHR မှသဘောမတူကြောင်း၊ သူတို့သည် ၀ န်ထမ်းများအားလျှို့ဝှက်ကင်မရာများတပ်ဆင်ခြင်းအကြောင်းမပြောခြင်းနှင့် ၀ န်ထမ်းများအားလုံးကိုလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည် အချိန်ကန့်သတ်ခြင်းမရှိဘဲ။
ECHR ကလျှို့ဝှက်စောင့်ကြည့်မှုသည်သူတို့၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဘဝကိုအနှောင့်အယှက်ပေးသည်ဟုခံစားခဲ့ရသည်။ အကြောင်းမှာငွေရှင်းကောင်တာတွင်သူတို့အလုပ်လုပ်ရန်အစီရင်ခံရန်လိုအပ်သောကြောင့်ရိုက်ကူးခြင်းကိုရှောင်ရှားခြင်းဖြစ်သည်။ ECHR ကဒေတာကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဥပဒေကိုလိုက်နာရန်အတွက် ၀ န်ထမ်းများသည်စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်မှုနှင့်ရည်ရွယ်ချက်နှင့် ပတ်သက်၍ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းတိကျစွာနှင့်ပြတ်ပြတ်သားသားအသိပေးရမည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ ၀ န်ထမ်းတစ် ဦး ၏ခွင့်ပြုချက်မရပဲစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ မည်သည့်အရာမျှလုပ်ဆောင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ
အကယ်၍ သင်သည်အလုပ်ရှင်တစ် ဦး ဖြစ်ပြီးသင်၏ ၀ န်ထမ်းများအားစောင့်ကြည့်ရန်အတွက်အရည်အသွေးမြင့်ကိရိယာများလိုအပ်ပါကကျွန်ုပ်တို့၏အရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များမှအကျိုးရယူနိုင်သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်သည် ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ.
3815 စုစုပေါင်း Views စာ4Views စာယနေ့တွင်